Kusaqhubeka ukufunwa kuka-Ajay Gupta noDuduzane Zuma | News24
Johannesburg - Amaphoyisa ophiko loKlebe athi ukuthungathwa kuka-Ajay Gupta kusaqhubeka.
Amaphoyisa asememezele ukuthi u-Ajay Gupta ubalekile futhi asefuna noDuduzane Zuma ngezinsolo zenkohlakalo.
Okhulumela oKlebe uBrigadier Hangwani Mulaudzi uthe kulindeleke ukuba kuboshwe inqwaba.
OLUNYE UDABA:Izikhulu zase-OR TAmbo Airport nazo ziyasiza ngokufunwa kuka-Ajay Gupta
Uqhube ngokuthi okwamanje besingakaphumeleli kodwa lokho akusho ukuthi sizohlala sigoqe izandla, sizoqhubeka nokumthungatha. Sizophinde sihlangane kusasa sibone ukuthi ngabe kufanele yini siyothungatha abanye abasolwa abangakaboshwa. Kufanele nisibekezelele ngoba asikwazi ukudalula amagama abantu abangakaboshwa njengoba lokho kuzolimaza icala."
Khonamanjalo, ihhovisi lamaphoyisa lithi uhulumeni akahambisani futhi uyaziqhelelanisa nomehlokaboni abakhishwe abantu abazimele ngokuboshwa kuka-Ajay noDuduzane Zuma. Lithi omehlokaboni bangase babeke engozini abasolwa, umphakathi nabantu abafana nabathungathwayo.